I-27 AMAGUMBI OKUHLAMBELA AMAHLE ANECLAWFOOT TUBS (IMIFANEKISO) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela I-27 Amagumbi okuhlambela amahle aneClawfoot Tubs (Imifanekiso)
I-27 Amagumbi okuhlambela amahle aneClawfoot Tubs (Imifanekiso)
Le galari inezindlu zangasese ezintle ezineebhafu zeenyawo. Apha ngezantsi uyakufumana imifanekiso yeendlela ezahlukeneyo zebhafu ye-clawfoot ukuze ufumane eyona uyithandayo kwaye ilungele indawo yakho. Iibhafu ze-Clawfoot sele zikhona ukusukela emva kweminyaka yoo-1800 kwaye zihlala zithathwa njengezitofotofo. Ezi ntlobo zeetyhubhu zakhiwa ngokubanzi nge-iron-cast nge-porcelain coating, okanye nge-acrylic.
iitshathi zokuhlala kwamatheko emitshato
Nazi ezinye zeentlobo ezithandwa kakhulu kwiibhafu zeclawfoot:
- Iroli yesiqhelo ephezulu yomphetho wenyawo uzipho - Esona sitayile siqhelekileyo sebhabhu enemilo yeklasikhi ene-backrest ethambekileyo kwelinye icala.
- Isiliphu uzipho ibhafu yonyawo -Uyilo lwebhafu lunomqolo ophezulu kwelinye icala lokuthuthuzela okuphuculweyo.
- Iphindwe kabini inzipho yenyawo - Olu hlobo luneziphelo ezijikelezileyo kumacala omabini ekunikeza ukhetho lwelinye icala njengendawo yokuhlamba.
- Isiliphu senyawo esityibilikayo -Uphelelisiwe kumacala omabini kunye nokwakhiwa okuphezulu komva kwentuthuzelo eyongezelelweyo.
Le ndawo yokuhlambela yokuhlaziya ibandakanya izinto ezikumgangatho ophezulu ezinje ngomgangatho wemabhile kunye nekhawuntara yemabhile. Izibane ezininzi zesibane ezisetyenziselwa ukukhanya kwesipili kunye nesiphatho sokukhanya kwesilingi kongeza isandi esihle sokutshatisa ityhubhu yonyawo lwakudala. Iikhabhathi zoyilo zesiko zifakelwe indawo yokugcina engaphezulu. Ilaphu lekhethini elikhanyayo livumela ukukhanya ukuba kudlule kwaye linike isithunzi somhlaba omhle ngaphandle.
I-Double Slipper Clawfoot Tub
I-Iron Iron Clawfoot Tub
Itheyibhile yeAntique yeClawfoot
Ityhubhu emnyama yeClawfoot
I-Double Slipper Cast Iron Tub
Ityhubhu ebomvu yeClawfoot
IVintage Clawfoot Tub
I-Clawfoot Tub eneziko lomlilo
Isiliphu Clawfoot Tub
Ityhubhu encinci yeClawfoot
I-Chrome Cast Iron Tub
I-Clawfoot Tub eneenyawo zeNgonyama
I-acrylic Clawfoot Tub
Le ndlu yokuhlambela inombala ocacileyo wodonga oluhlaza, inika umhlaba kwaye ipholile, kwaye idityaniswe nemigangatho emhlophe emhlophe emhlophe kunye neethayile zemibala. Ibhafu yokuhamba ezimeleyo enemilenze yesilivere ibekwe ecaleni kwendawo yefestile ye-bay kwaye inikwe ugxininiso ngakumbi ngokusetyenziswa kwekhandlela elincinci lekristal. Ukukhanya kwesilingi yekristale yindlela entle yokuseta isibane esizolileyo sokukhanya njengoko uphumla usuku. Inkwenkwezi yeli gumbi lokuhlambela eliyintloko ibhafu emhlophe etyibilikayo ebhafini yeenyawo ezinenyawo ze-nickel, ibekwe embindini. Isikrini esenziwe ngeglasi esilungiswe eludongeni lweemabhile zeshawari kuthintela amanzi ekuhlambeleni kwimabhile. Ikhabhathi yeWenge yamampunge ekugqityweni kweoyile kunye nekhawuntara yemarble inika umahluko kwisikimu sombala wendawo.
Le ndlu yokuhlambela yendabuko ibonisa ubuhle ngokuba nesitayile esimile simahla esineenyawo kwikona yegumbi apho ungonwabela khona umbono ngeefestile ezimbini zaseFrance. Iphalethi ethambileyo kunye ethintelweyo yeendonga, i-white marble counter top kunye ne-white square tile tile zigunyaziswe sisikimu sombala ongwevu ukusuka kwikhabhathi ye-vanity kunye ne-draperies ezinzima.
I-marble vanity counter top, ukukhanya kwe-crystal ukukhanyisa kunye neenyawo zethusi ezenziwe ngeenyawo zentsimbi kunye ne-classic roll rim kunika le ndawo yokuhlambela yendabuko ngokubonakalayo. Ukuthelekisa indlela ebekiweyo, ngaba uyilo lweepatriyometri zemigca elula yeefestile, iiphaneli zodonga kunye neekholamu ezichanekileyo.
Umqulu weklasikhi ojikelezwe yintsimbi yenyawo yentsimbi eneenyawo zeengonyama zibekwa nje ngefestile ye-bay. Umgangatho wesahla esicocekileyo sesahlulo seglasi esicocekileyo esivumela ukuba ukonwabele ukujonga igadi entle ngaphandle. Indawo yekhaphethi inikezela umphezulu onganyangekiyo xa usenyuka ebhafini kwaye ukhusela ilitye lendalo.
Iiphaneli zewinscot ezimhlophe ezigqityiweyo zisebenza ngokugqibeleleyo ngeendonga zepeyinti ezithambileyo zepeyinti, i-cornice emhlophe kunye nepeyinti emhlophe epeyintiweyo kunye nomnyango. I-penny shape mosaic tile idala umdla kwaye ithathe isibheno sayo yonke imhlophe-emhlophe esentloko yonyawo lwenyawo olufaka ibhafu kunye nesinki yentsika. I-rustic amampunge kunye nosihlalo we-Windsor onesihlalo esinezibuko ezijikelezileyo zinika isandi kule ndawo yokuhlambela.
Ubhedu olukhazimlisiweyo lunokubonwa lonke eli xesha kwisitayile sendabuko sokuhlambela. Iindonga ze-wainscot mahogany ezihlanganisiweyo zidityaniswe nephepha elimnyama elithe nkqo, izibane ezixhonyiweyo, kunye nezikhuselo zongeza ubushushu kunye nokuchukumisa. Iinkcukacha ezinesitayile zalomdiliya uzipho webhafu yonyawo olunendawo yokuhlambela edala ubume obunomtsalane kunye nendawo entle. Umbala omhlophe we-ceramic tile kunye nomda weemarble omnyama kunye nepateni yedayimani elinganisa ilitye lendalo.
Chitha ixesha lokuntywila kwindawo yokuhlambela eshushu kule gorgeous cast cast claw foot foot. Iithayile zomgangatho kaMoses zisetyenziselwa umgangatho owenziwe ngombala kunye nokufezekisa umahluko kuyo yonke le ndlela yokuhlambela yobugcisa. I-wall mounted double sink marble top igcina inani elibalulekileyo lendawo kule ndawo yokuhlambela yenkosi encinci. Iidrafti zobuso bezibuko zibonelela ngengqondo yendawo eyongeziweyo kunye nodonga lwamatye oluphefumlelweyo olugqibileyo loyilo ngobunono.
Ukuma simahla kweenkuni ezilukhuni ezimileyo kunye neesinki ze-porcelain ezibini, ikhawuntala yemabhile ephezulu, izibuko ezenziwe ngobhedu kunye nezinto zokuhlambela lelinye ixesha lesitayile sokuyila igumbi lokuhlambela. Isitayile seVintage isitayile se-acrylic esitshibilikayo esinenyawo ngegolide yengonyama iinyawo zipeyintwe ngombala omnyama kwaye zihamba ngokugqibeleleyo kunye nomgangatho wemabula yomgangatho.
Hlaziya kule ndawo yokuhlambela yothando kunye nokulula ukuntywila kwisiliphu esithandekayo esine-clawfoot tub. Umgangatho wamatye wendalo owolulela emgangathweni ukuya kwiglasi yesilayidi evalelweyo ethintela ukutyibilika kwezi ndawo zombini.
Esi siko sihle sipeyintiweyo senzipho yonyawo ibhafu ebekwe kufutshane nendawo yomlilo eyenziwe ngethayile ejikelezwe ziindonga zemabhile ezinepateni yebhodi yejiyometri inika le ndawo yokuhlambela uphawu lobungangamsha. Eyilwe ngefestile kunye nendlela yokuhamba, i-mosaic tile wall kunye nesitayela sekhandlela esenziwe ngodonga lwentsimbi, ukukhanya kwento enzima kunye ne-granite counter top kunye ne-flooring yamatye ebonakalayo kwindalo.
uhamba phantsi iingoma zendlela
Umxube wokudibanisa kunye nomdlalo wale ndawo yokuhlambela, usebenzisa ubume obahlukileyo kunye neetoni zendalo zamatye kunye namatye adityaniswe nomgangatho weplanga womthi uzisa ubuhle bendalo kwimbonakalo yendlu engaphakathi. Ibhafu ebomvu ye-acrylic claw yonyawo eneenyawo zegolide kunye nezinto zeetompu zegolide zenza isandi esithandekayo.
Eyilelwe ukwenza ulungelelwaniso lwezinto zesintu nezala maxesha, ibhafu yeenyawo ezinenyawo kunye nesilivere yeenyawo zidityaniswe ngento engento emnyama enesitayile semabhile emhlophe. Ipateni emarmore emhlophe, ikristale encinci kunye nodonga lwamatye lubonisa izinto zakudala zeli gumbi lokuhlambela
Ulwandle oluthambileyo oluhlaza lwe-hex mosaic flooring ekwabuyela kwiglasi evaliweyo indawo yokuhlambela ilingisa isitayile sonxweme. Hlaziya kule vintage emhlophe ye-classic roll roll rim cast claw foot foot bathtub ngelixa wonwabele umbono wembonakalo yangaphandle.
Konwabele ubhetyebhetye bokuhlala kwelinye icala lendawo yokuhlambela, ukuntywila kwindawo yokuhlambela eshushu ngelixa ujonge ngaphezulu kwamagqabi emithi kule ndawo yokuvuna igqityiweyo iphindwe kabini uzipho lwenyawo ngeenyawo ezimhlophe. Umgangatho kaMoses uthintela ukutyibilika kwaye wongeza ubume kolu loyilo lulula lokuhlambela.
Endaweni yokuba ibekwe kufutshane nefestile, le tyhubhu iphothiweyo yentsimbi yenyawo ibekwe ecaleni kwendawo yomlilo enengubo eqinileyo yomthi. Iithayile zomgangatho kaMoses phantsi kwebhafu zinqamlezwe yitye ye-travertine yelitye yendalo inika ipatheni ekhethekileyo kunye nophawu. Ikhabethe enkulu engeloncedo leplanga elinomgxobhozo ongaphantsi kwe-mount kunye ne-slab ye-granite inikezela ngexesha langoku kwaye lihle.
Igumbi lokuhlambela elihle elinendawo yokuhlambela yonyawo kunye neenyawo zesilivere ingqongwe ngodonga lwethayile yangaphantsi yodidi. Ithayile yomgangatho wayo omnyama kunye nomda omnyama omda omnyama ugxininisa indawo yokuhlambela kunye neeshawari. Iifestile zepaneli ezintathu, isinki ezimbini zokuntywila kunye nophahla lweeplanga zinika le ndawo yokuhlambela uyilo lwesitayile selizwe ekhululekile.
Iindonga eziluhlaza okwesibhakabhaka ezigxininiswe bubungakanani beefreyimu zemifanekiso, ifestile yohlobo lwesiFrentshi kunye nomgangatho wemarble ongwevu ngombala unceda ekwenzeni igumbi lokuhlambela elihle neliphuphayo. Ukwahlula udonga olusezantsi ukwahlula ishawa, ibhafu kunye nendawo yangasese. Izitayile zegumbi lokuhlambela ezinje ngetawuli emileyo yasimahla kunye nebhasikithi ibamba iitawuli ezingaphezulu.
Olunye uluvo lwendlu yokuhlambela lwenziwe ngesitya esimanzana esineenyawo zesilivere ezinyaweni zesilivere kunye neepompo zesilivere, ipaneli yodonga emhlophe yokuhombisa, iithayile ezimhlophe zemibala, ibhentshi emhlophe emhlophe enomqamelo inxitywa ludonga oluqatyiweyo oluhlaza.
Uyilo lobuGcisa kunye nezobuGcisa linika le ndawo yokuhlambela umbala wombala weetoni zomhlaba. Igumbi lokuhlambela elinomtsalane loMenzi wezinto zobugcisa linophawu lokusebenzisa iithayile ze-porcelain zendalo emgangathweni nasezindongeni. Iithayile ezinemida esecaleni zisetyenziselwa isiseko sokuntywila kunye nebala elimhlophe le-acrylic slipper claw yonyawo obonisa uyilo lokugqibela lwaseMelika.
Iringi yomtshato ihamba kweliphi icala
Vumela ukucinga kwakho kusebenze ngokukhululekileyo kunye nasendle kunye nale ndawo yokuhlambela. Iphepha eliseludongeni, umzekelo, iithayile zeceramic ezenziwe ngomthi, isilingi eyenziwe ngesiko, isandi sesitayile esenziwe ngesinyithi, umthunzi wesibane somgangatho wedrama eyongeziweyo, isinyithi esenziwe ngeglasi yentsimbi yentsimbi kunye ne-acrylic claw foot tub enenyawo zasebukhosini ezigqibezela lo mxube kunye nomdlalo isitayile.
Igumbi lokuhlambela eliyinkosi eliyilelwe indawo yokuhlala kunye nesihlalo sendawo yokuphumla. Ngenisa kule bhu yozipho ngeenyawo zegolide. Umgangatho wemabula omiselweyo usebenza kakuhle ngethoni emnyama emnyama enzima yokuthambisa yemarble kunye neeseti ezimbini zeedraw. Ipendenti yendabuko yobhedu kunye nezibane zamakhandlela kunye nesitayile sekhandlela ukukhanya kodonga oluphindwe kabini kunika le ndawo yokuhlambela isiphumo sokukhanya.
Yakha iofisi yasekhaya
Uyilo olulula kodwa oluhle lokuyila igumbi lokuhlambela lisebenzisa i-chrome endala eyenziwe ngentsimbi yokubhabha ibhafu yonyawo, iithayile zetiles eziphakathi zeteyile, isandi sesiphatho kunye nendawo yokuhlala enekhaphethi.
Ngokuqinisekileyo ulungelelanisa udidi lweendawo zokuhlambela ezintle ezineebhafu ze-clawfoot yile ndawo yokubaleka yangasese enesitayile esinenyawo kunye neenyawo zeengonyama. Ukubeka ityhubhu kude nefestile kubonelela ngasese ngakumbi kwaye kujongeka kubekwe kakuhle njengendawo esembindini wegumbi. Eyaziwa ngokuhlala kwayo kunye nokugcinwa okuphantsi, i-marble yeetoni ezimbini isetyenziselwa ukutyibilika kwithayile kunye nodonga lwe-wainscot. Imarble yethoni emnyama enzulu isetyenziselwa umphezulu wekhawuntara ukuqhubeka koyilo.
Le ndlu yokuhlambela entle isebenzisa umgangatho ophezulu wesilayidi esinee-grains ezintle kunye nombala osisityebi-uphawu olugqibeleleyo kwiindonga ezimhlophe ezipeyintiweyo, iithayile ezimhlophe zangaphantsi kunye nendawo ecacileyo yokuhlamba iglasi. I-French Bateau claw foot tub eyenziwe ngepeyinti ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka inika le ndawo yokuhlambela ithambe.
Igumbi lokuhlambela elikhulu lokumkani lenzelwe ubukhosi bamaxesha aphakathi. Udonga olubunjiweyo lweRustic olulinganisa umgangatho weemabula, udonga lobhedu, ukuma ngokukhululekileyo okunzima kwento enamatye aphezulu emarmore, isipili esikhulu esenziwe ngocingo, ityhubhu yenyawo yobhedu, ubhedu kunye nemifanekiso eqingqiweyo yemabhile zizinto eziqhelekileyo zendlela yoyilo lokuhlambela.
Igumbi lokuhlambela eliphefumlelweyo lesiGrike lihlotshiswe nge-Rosalind acrylic claw foot tub, i-Carrera marble flooring, emnyama emnyama eyibhodi yamaqhosha yamaGrike adityaniswe neetayile ezimhlophe zendlela engaphantsi kwaye ibalaseliswe ngumbala wobugcisa osisityebi. Zonke izinto zilinganisa ubuhle bempucuko yakudala.
Iingcamango zoyilo lwegumbi lokuhlambela - Uyikhetha njani iBhafu - I-25 entle yoyilo lweGumbi lokuhlambela - Imifanekiso yeShower Luxury
Ngaba u-meredith kunye no-derek bayatshata
isipho somntu obalaseleyo umzalwana
Eyona mibala yepeyinti yefoyer
imibono yezipho eziphezulu kuye